SSE UMPTKIN Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
Salama daholo, tonga eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android hafa antsoina hoe SSE UMPTKIN App. Araka ny fantatrao, ny sasany amin'ireo oniversite tsara indrindra dia manova ny lamin'ny fanadinana fidirana. Ankehitriny ianao dia afaka mandray anjara amin'ny fanadinana fidirana ao an-tranonao amin'ny alàlan'ny UMPTKIN.
Araka ny fantatra dia tsy azo antoka ho an'iza na iza ny fivoahana amin'izao fotoana izao. Noho izany, sarotra ho an'ny mpianatra ny miditra amin'ny oniversite. Saingy mamaha ity olana ity ny governemanta amin'ny fampidirana ity fampiharana ity izay mamaha ny olana rehetra.
Tsy momba ny fitsapana fotsiny izany, fa manolotra serivisy hafa ihany koa. Hizara bebe kokoa momba ity fampiharana ity izahay. Noho izany, mijanòna miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy hahafantarana bebe kokoa. Raha manana olana ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Topimaso momba ny SSE UMPTKIN
Izy io dia fampiharana Android maimaim-poana, izay novolavolain'ny Minisiteran'ny Fivavahana RI. Ny antony fototra dia ny hanaovana rafitra fanabeazana tsara kokoa. Horaisina mitovy avokoa ny mpianatra rehetra. Io ihany koa no fomba tsara indrindra hanohizana izany toe-javatra izany rehefa tsy azo antoka ny fivoahana.
Misy oniversite maromaro, izay manolotra ny fizotry ny fidirana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Hizara ny collage aminao izahay amin'ny lisitra eto ambany. Mbola hisy fanampiny anefa any aoriana, amin’izao fotoana izao, misy telo.
Anjerimanontolo Silamo fanjakana (UIN)
Ivon-toerana momba ny fivavahana Silamo (IAIN)
Sekolim-pinoana Silamo State (STAIN)
The App fampiharana manolotra ihany koa ny fotoana sy ny daty fitsapana farany. Afaka miditra sy mandray anjara amin'ny fitsapana ianao amin'ny fampiasana ity fampiharana ity. Izy io koa dia manolotra ny antsipiriany rehetra takiana, miaraka amin'ny fitsipika sy fitsipika. Raha mandika fitsipika ianao dia hatsahatrao ny fitsapana.
Afaka mandray anjara amin'ny andrana entre avy any an-tranonao ianao, fa hojeren'ny Minisiteran'ny Fivavahana RI amin'ny alalan'ny fakantsary ary tokony ho irery ianao farafaharatsiny tsy tokony hisy olona ao anatin'ny radius 3 metatra ary raha mandika io fitsipika io ianao atsahatra.
anarana SSE UM PTKIN
Anaran'ny fonosana io.gonative.android.rqoprb.debug
Developer Rqoprb Debug
Ilaina ny fanampiana kely indrindra Jelly Bean (4.1.x) - API haavo 16
Endri-javatra lehibe an'ny SSE UMPTKIN
Rehefa miresaka momba ny sasany amin'ireo endri-javatra ao amin'ny andalana etsy ambony isika, dia misy bebe kokoa rehefa manomboka mikaroka ity fampiharana ity ianao. Noho izany, hizara aminareo ny sasany amin'ireo aho, izay hitako mahagaga momba ity app ity. Azonao atao koa ny mizara ny traikefanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Fomba tsara indrindra amin'ny fitsapana Entre
Ahoana ny fomba hidiranao amin'ny App UMPTKIN?
Raha hiditra amin'ny App UMPTKIN dia zavatra roa ihany no ilainao. Ny voalohany dia Nomera SIP ary ny faharoa PIN. Raha vao manoratra ireo roa ireo ianao dia afaka miditra. Azonao atao ny mahita ny SIP Num sy PIN amin'ny karatra fidirana, izay navoakan'ny institiota.
Ahoana ny fampidinana ny UMPTKIN Apk?
Raha misintona ny UMPTKIN AC ID Apk dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao. Ny bokotra fampidinana dia hita eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Mila mikitika azy fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fampidinana dia tsy maintsy manova fanovana vitsivitsy ianao alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fametrahana. Mba hanaovana izany dia mandehana any amin'ny Settings, sokafy ny Security, ary jereo ny 'Source tsy fantatra'. Rehefa vita izany dia azonao atao ny mametraka ny rakitra Apk ao amin'ny fitaovanao Android.
SSE UMPTKIN Apk no fampiharana Android farany indrindra, raha manolotra fomba tsotra sy azo antoka handray anjara amin'ny sekoly sy kolontsaina ary oniversite Indonezia Indonesia tsara indrindra.
Io no kinova farany, izay iray amin'ireo takian'ny tompon'andraikitra. Raha mampiasa kinova taloha ianao dia esory ny kinova taloha ary apetraho ity rakitra Apk ity.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags App fampiharana, SSE UMPTKIN, UMPTKIN, UMPTKIN apk, UMPTKIN App Post Fikarohana
New Epoch Apk misintona maimaim-poana ho an'ny Android 